GIF feno fihetsiketsehana mahafinaritra amin'ny rakotra Rock angano 22 | Famoronana an-tserasera
Misy fonony vato izay tena fahombiazan'ny sary. Na dia mazava ho azy aza, ny tena atiny dia ny atin'ny feo sy ny mozika, ny sary dia manana zavatra betsaka holazaina satria izy io dia manampy amin'ny fanamafisana ny maha-izy azy sy ny marika amin'ilay vondrona resahina.
Fantatrao ve ireo rakotra angano momba ny tantaran'ny rock? Androany aho nahita GIF Animated Animated mahafinaritra nataon'ny tanan'i jbetcom ary azoko antoka fa hahafinaritra anao araka izay tiako ny karazana mozika tianao.
1973 - Pink Floyd - Ny lafiny maizin'ny volana
Ny piramida fitaratra iray eo afovoany very mainty no lasa fiara hamadika hazavam-pahazavana ho avana matevina sy miloko. Famolavolana tsotra ho an'ny rakikira lava indrindra amin'ny tabilao Billboard hatramin'izao, izay mitontaly 15 taona mahery miaraka amin'ny hira toa ny Money ary maherin'ny 50 tapitrisa no amidy eran-tany.
1976 - Oroka - Rock and Roll Over
Ny tarehin'ireo mpikambana eccentric ao amin'ny vondrona dia aseho amin'ny sary fisaka natsofoka tao anaty afo afo ary miaraka amin'ny sary famantarana ny tarika amin'ny tendrony manga manga. Eo afovoan'ny sehatra tsy misy loto misy loko mainty, loharanom-pahamafana, fihetsem-po ary dinamika no noforonina. Io no rakikira fahadimy nataon'ny tarika nahavita namorona ny sariny sy ny mari-pamantarana azy tamin'ny fomba mahomby izaitsizy. Miaraka amin'ny hira toa an'i Hard Luck Woman sy Calling Dr. Love dia nahomby izy ireo tamin'ny fivarotana kopia iray tapitrisa mahery. Amin'ny maha anechode azy dia niseho tao amin'ny Monsters University, sarimihetsika Disney ity fonony ity.
1984 - Metallica - mitaingina ny helatra
Seza elektrika iray no mitazona ny afovoan'ny hatsiaka sy ny endriny nilaozana ary manodidina azy ny varatra. Iray amin'ireo rakikira tsara indrindra tao amin'ny vondrona izy ary nahavita nahazo kopia maherin'ny 5 tapitrisa, zava-misy nahagaga raha nandinika fa tamin'izany fotoana izany dia tarika Heavy tena tanora izay vao natambatra.
1987 - Alice Cooper - Atsangano ny totohondrinao sy Yell
Miaraka amin'ny rivotra mahatsiravina dia atolotra antsika ny tarehin'ny lehilahy iray mikiakiaka eo an-tànan'ny lehilahy iray ary mihenjana. Nanjary fonosin'ny angano sy rakikira ekena izy io izay hahitana ny maro amin'ireo hirany ao amin'ilay horonantsary eponymous izay hisehoan'ny trangana angano Alice Cooper ho toy ny tramp.
1987 - Basy n Roses - Fiainana manimba
Ny karandoha misy volo matevina ary miorim-paka amin'ny lakroa dia fomba haingana sy mahomby hampitana ny fitiavam-bavaka amin'ny rock sy mandritra ny androm-piainana, zavatra izay tsy isalasalana fa hisarika ny sain'ireo mpankafy mahatoky indrindra amin'ny karazana. Ity no rakitsary Guns & Roses voalohany nametraka azy ireo tamin'ny sarintanin'izao tontolo izao ary nametraka azy ireo ho iray amin'ireo tarika mavesatra indrindra amin'izao fotoana izao, ary na dia androany aza dia mbola tsapany ho toy ny rakikira voalohany mahomby indrindra teo amin'ny tantara miaraka amin'ny hiram-panahy toa ny Welcome to ny ala.
1987 - Helloween - Keeper Of The Seven Keys, Fizarana 1
Io no voalohany tamin'ny tarika metal alemana Helloween. Eo amin'ny fonony dia misy karazana moanina tsy manam-tarehy izay manangona baolina kristaly feno fanalahidy. Heverin'ny mpitsikera ho iray amin'ireo sanganasa kanto indrindra ao amin'ny vondrona izy.
1988 - Fivavahana ratsy - Mijaly
Tovolahy iray tototry ny afo ary nitodika tany aminay dia nandinika ny arabenà tanàna iray. Io dia tsy isalasalana fa iray amin'ireo rakikira manan-danja amin'ny karazana punk raha ny tena izy Far Mike avy amin'ny NOFX dia namaritra azy ho ilay rakikira nanova ny zava-drehetra.
1988 - Jodasy Mpisorona - Nidina io
Ny totohondry Andriamanitra dia mamely tampoka ny planeta iray tototry ny afo sy lava. Izy io dia rakikira fahiraika ambin'ny folo an'ny tarika Judas Priest ary fantatry ny fananganana an'i Turbo nariana narakitra indray ary noho izy rakikira farany niandraiketan'i D. Holland ny amponga.
1988 - Metallica -… Ary ny rariny ho an'ny rehetra
Ny andriamanibavin'ny fahamarinana dia taritin'ny tady maromaro manafika amin'ny lafiny samihafa ary mahatonga azy hamoy vola. Izy io angamba no rakikira be fanoloran-tena ao amin'ny vondrona misy anay ary iray amin'ireo fahombiazana indrindra: Raha atambatra, maherin'ny 1 tapitrisa ny kopia amidy manerantany.
Izy io dia sary famantarana ny sivolo amby sivifolo ary mazava ho azy fa tsy mety tsy hita izy io amin'ity fanangonana ity. Amin'ny maha-fonony azy dia miseho eo ambanin'ny rano ny zaza mitanjaka ary manaraka dolara dolara ho toy ny moka. Raha jerena izany dia azontsika an-tsaina hoe iza ilay mpanjono: ny indostria, izay mamarana ny fahadiovan'ny artista amin'ny alàlan'ny fifanarahana vola sy firaketana. Raha atambatra dia amidy maherin'ny 30 tapitrisa ny kopia ary azo antoka fa tsy maintsy ho an'ny mpitia mozika rehetra izany.
1993 - Blur - Fako ny fiainana maoderina
Fiaran-dalamby iray no mandehandeha mamaky faritra sy mandoro setroka ary setroka. Io ilay rakikira faharoa nataon'i Blur ary ilay teo alohan'ireo rakikira izay nanova mandrakizay ny tantaran'ny rock alternativa tany Eropa.
1994 - Rancid - Andao handeha
Eo amin'ny lafika iray voaloton'ny rà mena sy eo akaikin'ny sarintanin'izao tontolo izao dia atsangano totohondry eo ambonin'ny mari-pamantarana Let's Go. Na dia tsy dia lavitra loatra aza ireo rakikira hafa tamin'ity lisitra ity dia nahatratra ny fanekena sy ny varotra.
1995 - Ny voatavo mamaky - Mellon Collie ary ny alahelo tsy manam-petra
Vehivavy manao akanjo mahazatra no mivoaka avy amin'ny kintana iray amin'ny hafaliana. Ity rakikira ity dia ny fanamasinana ny tarika satria anisan'ireo zavatra maro hafa nahitany ny laharana voalohany tamin'ny Billboard 200,
1997 - Aerosmith - Fiainana sivy
Kodiarana iray manjombona noho ny manjombona no nibodo ny rakotra rakikira faharoa ambin'ny folo nataon'i Aerosmith tamin'ny andron'ny vondrona ary nandresy ny tsenan'i Etazonia.
1998 - Korn - Araho ny Mpitarika
Tovovavy iray mena no hidina any anaty banga eo afovoan'ny kilalao tsy manan-tsiny no naneho ny fiampangana ara-pientanam-po sy mahatsiravina an'ilay vondrona. Mpivarotra tsara indrindra izy io ary fanehoana tsara ny vy vy.
1998 - Ilay firenena hafa firenena - Amerikanina
Izy io angamba ilay rakikira izay namaritra tsara ny fivoaran'ny punk rock sy skate punk tamin'ny taona sivifolo. Eo amin'ny fonony dia misy fanoharana tsotra momba ny tovolahy iray miloko volo milomano ary mitazona bibikely goavambe.
1999 - Pennywise - Mahitsy eo alohany
Mandeha haingana be mankany amin'ny tanàna ny tanky iray ary azontsika atao ny mahatsapa ny fahatezerany amin'ny mpamily azy izay soloin'ny loko mena. Na dia tsy rakikira iray nisongona ny tabilao varotra aza izy io dia nahazo ny fankatoavan'ny mpitsikera manokana.
2002 - Jethro Tull - Miaina miaraka amin'ny lasa
Ny varavarankely fitaratra misy katedraly Gothic dia vaky noho ny aloky ny vehivavy iray izay mamela topy maso ny lanitra, mariky ny fahalalahana. Izy io dia rakikira roa izay mifangaro amin'ny lafiny maro amin'ny tarika ary maneho tsara ny fivoaran'izy ireo.
2006 - NOFX - Aza matoky an'i Hippy mihitsy
Ny sary dia nataon'i Rick Remender. Tao i Jesosy no nitana tavoahangy misy divay ary nilaza hoe tsia amin'ny tanany. Ao amin'ny dikanteny: "Aza matoky an'i Hippie mihitsy."
Ho fonony mosaic miaraka amina seho surreal marobe. Ny fandraisana ny rakikira dia zava-dehibe tany Etazonia, Espana, Aostralia na Portugal.
Misy endrika mipoitra amin'ny alàlan'ny surf. Ity no asa fahafito sy farany nataon'i Angra, tarika vy fandrosoana Breziliana izay navoaka tany Brezila sy Japon ihany.
2012 - Led Zeppelin - Andro fankalazana
Sary minimalista miaraka amin'i Londres ho filentehan'ny masoandro. Ity dia mivantana avy amin'ny Led Zeppelin tamin'ny 2007.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » GIF feno fihetsiketsehana mahatalanjona rakotra Rock angano 22
Pankioman dia hoy izy:
Tiako ny nahita rakikira Pennywise tamin'ity fifantina ity: D
Valiny tamin'i Pankioman
Ilay iray miaraka amin'i Metallica sy Alice Cooper! matsiro !!!